Posted by Philip Shield at 12:11 PM
Congratulations to Ko PWK and Ma KMN !!!!
Wishing youawonderful beginning, and love to lastalifetime!!
May you find love and happiness in each other and in each day of your life together :-)
Congratulations Ko Phyo!
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဘ၀အေးအေးလေးတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ပါစေ...။
CONGRATULATIONS U GUYS!!
ဟေ့လူကြီး .. ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ
ဘုန်းကြီးကျောင်းလဲ ခေါ်လာဦးနော် .. အိမ်တွင်းအောင်းမနေနဲ့ .. ဟိဟိ
KO PWK and Mee Mee
Wish you both haveapeaceful and happy life forever.
htet naing lynn said...
congratulations ~ :D
Congrats, Friend. See your family here soon.
အစ်ကိုက ပို့စ်မတင်ဘဲပျောက်ချက်သားကောင်းနေတာဒါ့ကြောင့်ကိုးဗျ..ယနေ့မှစ နှစ်တစ်ရာတိုင်ပါစေဗျာ
I visited this blog without any idea. But I read your good news.
Nowaday to forever !!!
အိကောရေ ... ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း ပါ ခင်ဗျာ ..
မှတ်မိ မလား မသိဘူး ၁၉၇ ဘတ်စ်ကား ပေါ်မှာ ဆုံဖူးတယ်လေ .. မုံရွာသား ပါ ..
မမျှော်လင့်ဘဲ ဒီဘလော့ကို ပထမဆုံး ရောက်လာရာက မမျှော်လင့်ဘဲ ခုလို ဆုတောင်းပေးခွင့် ရတာ အံ့သြ ၀မ်းသာ မိပါတယ်။ သည်လင် သည်မယား တသက်လုံး ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူတကွ နေထိုင် သွားနိုင် ကြပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဟေ့လူကြီး ဘလော့ရပ်နေတာ တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီနော်။ ဒီနေ့တော့ သတိလာပေးတာပါ။ ပြန်ရေးပါဦး။ လေဒီကို ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ပေးရှုတ်ထားလိုက်ဗျာ။ ခင်ဗျား စာပြန်ရေးတော့။ ဟိဟိ။